Xildhibaan su’aal geliyay ansixinta xukuumadda ee xeerka doorashooyinka, ka hor shirka Garowe – Kalfadhi
Xildhibaan su’aal geliyay ansixinta xukuumadda ee xeerka doorashooyinka, ka hor shirka Garowe
Xildhibaan Daahir Maxamuud Muuse oo ka tirsan golaha shacabka BFS ayaa ka mid ah xildhibaanada sida adag uga ka hadlay sharciga doorashooyinka ee ay xukuumadu ansixisay toddobaadkii hore, kaas oo muran badan ka dhashay qodobada ku qoran qaarkood.
Xildhibaan Daahir ayaa sheegay in sharcigan uu muhiimad weyn leeyahay, wuxuuse diiday qodobada la xiriira doorashada dhow oo uu sheegay in ay iska hor imaanayaan. Wuxuu tilmaamay in xeerka lagu saleeyay doorasho qof iyo cod ahi in ay dalka ka dhacdo, misna uu xeerkaas aad uga dhex muuqdo nidaamka 4.5 ee hadda dowladdu ku dhisan tahay
“Dowladdan wakhti bay leedahay wakhtigii loogu talagalay in doorashadu ku dhacdo weeye” ayuu yiri Xildhibaan Daahir.
Waxay ahayd buu yiri intaan xeerka golaha xukuumadda la geyn isla markaasna la ansixin in talo laga siiyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah, isla markaasna lagu daro ajandaha shirka Garowe ka furmay, si la isula lafa-guro.
“Maxaa iyadoo shirku dhacayo ay golaha wasiiradu u ansixiyeen. Waa saambuuse laga adimay baan oran karnaa xaaladda hadda taagan” ayuu yiri Xildhibaan Daahir Muuse.
Baarlamanka JFS ayuu sheegay in uu dib eegis badan ku samayn doonaan xeerkan. Wuxuu sheegay in ay qiimayn doonaan xaaladda amniga isla markaasna ay ka tashan doonaan doorashada uu dalkani ka bixi karo. Wuxuu xusay in Soomaaliland ay muhiim u tahay doorashooyinka iyo arrimaha dastuurkaba.
Madaxtooyada Puntland oo war kooban ka soo saartay shirka wada-tashiga DFS iyo dowladaha xubnaha ka ah
Guddiga xuduudaha oo Aqalka sare u sheegay in aysan sharciga waafaqsanayn sida ay dowlad-goboleedyadu u dhismeen